Inqubomgomo Yobumfihlo ye-DataKit
INQUBOMGOMO YOKUFUNDA KAKHULU
We (DataKit Studio) sikuqonda kahle ukubaluleka kokuvikela imininingwane yomuntu futhi sizibophezele ukuvikela ubumfihlo bakho. Lesi sitatimende senqubomgomo yobumfihlo sihlanganisa ukuqoqwa, ukusetshenziswa, ukudalulwa, ukuphathwa nokuvikeleka kwemininingwane yakho yangasese engaqoqwa yiDathaKit. Kuvuselelwe njengoba kudingwa yi-European General Data Protection Regulation (GDPR). Ngokufinyelela kwiwebhusayithi yethu (www.ios-data-recovery.com) noma ukuthenga izinhlelo zethu zedeskithophu (i- "Products", "Services"), uyavumelana nalesi sitatimende sobumfihlo ngaphezu kwanoma yiziphi ezinye izivumelwano esingaba nazo.
1. Ukusebenza kwedatha kusetshenziswe yi-Datakit
1.1 Ukucutshungulwa kwemininingwane yomuntu siqu ehlobene nokuvakasha kwakho kuwebhusayithi yethu nokuthengwa kwakho
Njengomhambisi wesoftware (singabambisani ku-MyCommerce, Commission Junction, 2Checktout .etc), asiqoqi imininingwane yezezimali yomthengi nganoma yisiphi isizathu (Siqoqa ikheli lakho le-imeyili kuphela lapho uqala isoftware yokulanda kamuva nekheli lakho le-imeyili iphephile nathi futhi ayifinyeleleki kunoma ngubani ovela eceleni). Lapho uMsebenzisi ethenga umkhiqizo we-Datakit ngeWebhusayithi nge-2Checkout noma i-MyCommerce, Lezi zixazululo zokuthenga zabantu besithathu zisebenza ukucubungula imininingwane yomuntu ngale ndlela elandelayo:
1.1.1 Imininingwane yomuntu eqoqwe
Mayelana nalokhu kucubungula, i-2Checkout neMyCommerce iqoqa imininingwane yomuntu siqu elandelayo ngamafomu wokuqoqa ngenqubo yoku-oda noma ezinye izinqubo.
Imininingwane ye-oda, efana nemikhiqizo oyithengayo, usuku nenani le-oda;
Imininingwane yokukhokha efana nemininingwane yekhadi leSikweletu (uhlobo, inombolo, usuku lokuphelelwa yisikhathi, ikhodi yokuphepha ye-CVV) / imininingwane yekhadi lokudonswa kwemali noma eminye imininingwane yokukhokha / yokukhokha.
Inombolo yomkhiqizo wakho oyimfihlo;
Okuqukethwe kwezokuxhumana kokusekelwa kwamakhasimende.
1.1.2 Inhloso kanye nesisekelo sezomthetho sokucutshungulwa
IDatakit isebenzisa imininingwane esiyiqoqayo ngawe ngezinjongo ezilandelayo:
Ukuze i-Datakit ihlinzeke uMsebenzisi ngomkhiqizo (i) omiselwe;
Ukuze kwenziwe inkontileka lapho uMsebenzisi eyinhlangano yakhe, ngokuya nge-Article 6.1.b ye-GDPR nedatha eqoqiwe iyadingeka ukuze iDatakit ikhombe futhi ikhokhe uMsebenzisi futhi ikhokhise inombolo yekhadi layo lasebhange;
Ngokuqinisekisa ubuwena kanye Nokunikeza usizo kwamakhasimende noma ukusekelwa;
Hlaziya ukusebenzisa kwakho amawebhusayithi nemikhiqizo ukuqonda okungcono ukuthi isetshenziswa kanjani ukuze sithuthukise izinsizakalo zethu kanye nesipiliyoni somsebenzisi futhi sihlanganyele futhi sigcine abasebenzisi.
1.2 Amakhukhi nezokulandela
Lapho uMsebenzisi ecabanga ngeWebhusayithi kanye / noma Isicelo, i-Datakit isebenzisa amakhukhi namanye ama-trackers kudivayisi Yomsebenzisi.
Sisebenzisa iGoogle Analytics, insiza yokuhlaziya iwebhu kusuka kwaGoogle, Inc. ("Google"). AbakwaGoogle Analytics basebenzisa amakhukhi ukwenza sikwazi ukuhlaziya ukusetshenziswa kwewebhusayithi yethu. Imininingwane ngokusetshenziswa kwewebhusayithi yethu eyenziwe yi-Cookie ivame ukudluliselwa kuseva ye-Google e-USA bese igcinwa lapho. Kodwa-ke, ngaphambi kokuba lokhu kwenzeke, i-Google inciphisa futhi iveze ikheli lakho le-IP (inqubo ye-Google engamazisi igama) uma itholakala ngaphansi kwelungu lelungu le-European Union noma kwamanye amazwe anezinkontileka Esivumelwaneni Esisendaweni Yezomnotho YaseYurophu. Lonke ikheli le-IP lidluliselwa kwiseva ye-Google e-USA futhi ligcinwe lapho ezimweni ezihlukile kuphela.
Lokhu kungaziwa kuqinisekisa ukuthi ikheli lakho le-IP alikwazi ukulandela emuva. I-Google izosebenzisa lolu lwazi ukuhlola ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi ukuze ihlanganise imibiko ngemisebenzi yewebhusayithi ye-Aiseesoft futhi inikeze izinsizakalo ezingeziwe ezihambisana nokusetshenziswa kwewebhusayithi kanye ne-Intanethi. I-Google ingadlulisela lolu lwazi kubantu besithathu, lapho kufanele khona, uma kugunyazwe ngokomthetho noma uma izinkontileka ze-Google nezinkampani zangaphandle ukucubungula leyo mininingwane. I-Google ngeke ihlobanise ikheli lakho le-IP nenye idatha yakwaGoogle. Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uvuma ngokucacile ukuqoqwa nokugcinwa kwe-Google idatha yakho ngendlela nangezinhloso ezichazwe ngenhla.
Unethuba lokuvikela i-Google ekutholeni nasekusebenzeni idatha eyenziwe ama-Cookies nedatha ehlobene nokusebenzisa kwakho iwebhusayithi (kufaka phakathi ikheli lakho le-IP) ngokulanda nangokufaka i-plugin enikezwe yiGoogle.
2. Ukuxhumana Datakit
Uma uMsebenzisi edinga ukuxhumana ne-Datakit nganoma yisiphi isizathu (kufaka phakathi ukusebenzisa noma imaphi amalungelo ayo maqondana nokuvikelwa kwedatha njengoba kuchazwe ngenhla) sicela uxhumane ne-support@ios-data-recovery.com.
IDatakit izosebenza kwizicelo zoMsebenzisi futhi inikeze imininingwane mahhala, ngaphandle kwalapho izicelo zibonakala zingenasisekelo noma zenziwa ngokweqile (ikakhulukazi ngenxa yesimo sabo esiphindaphindwayo) lapho uDatakit angakhokhisa khona imali efanelekile (kucatshangelwa izindleko zokuphatha zokuhlinzeka imininingwane noma ukuxhumana, noma ukuthatha isenzo esiceliwe), noma senqabe ukwenza isicelo.